တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Home Plan PRO 5.2.26.4 Full Version (လက်သမား ဒီဇိုင်းဆရာများအတွက်)
Home Plan PRO 5.2.26.4 Full Version (လက်သမား ဒီဇိုင်းဆရာများအတွက်)
လက်သမား ဒီဇိုင်းဆရာများအတွက် အသုံးဝင်စေမှာပါ ... အိမ်ဒီဇိုင်းတွေကို ပါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲပေးမဲ့ Tools လေးပါ...။ အရင်ကတင်ပေးထားတာ Link အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးပြောလာလို့ Update Version လေးကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....။
New in version 5.2.26.1
Zoom from 6400′ to 1/32″
Detailed Print Preview
DrawaSeries of Parallel Lines
Draw Double Walled Rectangles
Wall Thickness in Fractions
Windows widths and patterns
Prevent Printed Text From Scaling Too Big
CreateaColumn of Text
Snap Grid spacing is saved for each zoom level)
Speed settings are also saved separately for each zoom level.
New Zoom Bar buttons provide instant zooming to any level
2. Home Plan Pro Install and run the program and then click "Enter Unlock Code"
3. Run Keygen> Click "Generate"
4. Use the name, serial and unlock code from keygen to register full version
Posted by အောင်မျိုး at 6:21 PM
Labels: Folder တွေကို ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းရတဲ့ Software
Vroot နဲ့ Root ဖောက်နည်း
How to Fix IDM fake serial number Error ( IDM fake...
Memory Card ဖြုတ်လျှင်
Baidu Root Tool for PC v3.4.01 and For Android v2....
Carrier Changer (Root) For Android (ဖုန်းလိုင်းစင်...
OfficeSuite Pro7(PDF &HD) v7.3.1543 Apk
အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့လာနေသူများအတွက် (Speak Your Wis...
Beauty Plus - Magical Camera v 1.1
Android 4.3 အတွက် မြန်မာစာ Font Apk လာပါပြီ
Angry Birds HD for PC Complete Collection of 2013
CD, DVD ခွေတွေကို virtual image ရိုက်ပြီးအသုံးပြုန...
Internet Download Manager 6.18 Build9Final (Rele...
Free Wifi တွေကို Auto ရှာပြီး ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် - Wi...
Facebook v5.0.0.0.8 (Latest Version)
မိမိစိတ်ကြိုက် လိုချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုပြောင်းဖို့ T...
EveryCircuit ( for Android )
Microsoft All Products Permanent Activator 2013
Microsoft Office 2013 Full Keygen ( X64 / X86 Bit ...
Microsoft Office 2013 all language 32bit + 64bit
Viber Offline For Android
ဖုန်းမှာ noti တခု့ခု့တက်လာတဲ့အခါ မီးလင်းပြီးတော့ အ...
နောက်ဆုံး update အသစ် Facebook v4.0.0.0.2 Apk
window 8 တွင် context menu မှ ကွန်ပြုတာပိတ်နည်း(Al...
Photo Shop ဝတ်စုံများ
MRTV-4 Live V0.1 For Android
ကွန်ပြူတာ ကို မြန်ဆန်သွက်လက် စေချင်ရင် ဒီဆော့ဝဲလ်...
Root Explorer For Android Updated to v3.1.3
MP3 VOICE RECORDER ( FULL ) 1.11.2 APK
Android Application ကို မြန်မာမှုပြုရအောင်
ဆင်ပေါက် – ပြန်ဆုံတိုင်း (2013) [Album]
အိမ့်ချစ် – အချစ်ရေး (2013) [Album]
Smile – New Me (2013) [Album]
ရဲရင့်ဝေလွင် – မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဘေးက .. ဟိုးဝေးဝေး...
မင်းဂျွန်စိုး – အခမဲ့ကျွန် [Album]
ပုန်းညက်ဖြူ – ရွှေဧည့်သည် [Album]
မိုးကျော်လှိုင် (ရွှေဘို) – ဓမ္မလင်္ကာတေးကဗျာ (ကြည်နူးဖ...
နိုင်မင်းအောင် – နယ်ကြိုက်သီချင်းသည် (Album)
တသသ – ဆွတ်ချူလှည့်ပါ ထာဝရမောင် (Album)
RAM Manager Pro Apk v5.3.3
ဖိုင်ထပ်နေတာတွေကိုရှာပြီးဖုန်းကို memory နေရာလွတ်ေ...
DU Battery Saver PRO & Widgets v3.4.0.pro APK (Upd...
မြင်းမွေးပြီး ပိုက်ဆံလိုက်စားရမဲ့ Game: Horse Worl...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-30 (25.10.13)
Samsung Galaxy Ace2GT-I8160 CWM and Root
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-29 (18.10.13)
Android Version 4.1.2 , 4.2.2 တွေမှာ မြန်မာစာ မမှန...
MRTV4အစီအစဉ်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ Online မှ...
မိမိရဲ့ Data တွေကို ဘယ်လို Backup လုပ်သင့်သလဲ?
No need mobile shop
ESET NOD32 Antivirus7v7.0.302.26 (32bit & 64bit)...
Internet Download Manager ကို အလွယ်ကူဆုံး Full Ver...
ကိုယ်ပွား ပုံလေးတွေ ဖန်တီးပေးမယ့် Clone Camera Apk...
Movies များကိုရှာဖွေသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ MoviesBoo...
Viber v.4.0.0.1707 APK (နောက်ဆုံး version)
MahJong v.1.1 (မာကျောက်ဝါသနာအိုးများအတွက်)
Animated Photo Frame Widget + v4.7.2 APK
Root tool အသစ် BaiduRoot.exe & BaiduRoot.apk
မိမိစိတ်ကြိုက်သီချင်းလေးတွေကို RingTone လုပ်ဖို့အတ...
ဓါတ်ပုံတွေကို Professional ဆန်ဆန် PicSay Pro Photo...
Firefox Browser for Android v25.0.1 Apk
အသစ် Update KitKat 4.4 Launcher Theme v1.93 Apk
jetAudio Music Player Plus v3.6.0 Patched Apk
Chrome Beta v31.0.1650.60 Apk
Advanced SystemCare Pro 7.0.6.361 Final Full Versi...
Goolge Play Store မှ APK တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှ မလိုပဲ ...
နောက်ဆုံးထွက် update အသစ်လေး VLC Media Player( 32 ...
Android ဖုန်းတွေကို အကောင်းဆုံး Protect လုပ်ပေးမယ်...
VRoot version 1.7.3 (15.11.2013)
Death Shooter 3D v.1.0.4 APK (သေနတ်ပစ်ဝါသနာအိုးမျာ...
My Talking Tom v1.0 Modded Unlimited Money Apk
ညအိပ်တဲ့အခါအိပ်ရေးမပျက်အောင် ဖုန်းကို Nights Keepe...
ဆော့ဝဲ တွေကို Lucky Patcher Apk v3.6.9 နဲ့ Full ve...
Android ဖုန်းသမားတွေအတွက် အသုံးဝင် All-In-One Tool...
ကားမောင်းပြိုင်ချင်သူများအတွက် - Drag Racing 3D v1...
Windows 8.1 Activator (ဝင်းဒိုး 8.1 တွေ အတွက်ပါ)
Feature အသစ်တွေထပ်တိုးလာတဲ့ - Viber v4.0.0.1707 AP...
Android သုံး မြန်မာပြက္ခဒိန် 2014 ထွက်ပြီ..
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-28 (11.10.13)
Network ပေါ်ကနေ Window တင်နည်းစာအုပ် (မြန်မာလို)
မြန်မာစာ ပါဝင်လာတဲ့ format factory latest version ...
ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျ ပေးပို့ရုံဖြင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်...
Subway Surfers ကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဆော့လို့ရပြီ (An...
Android မှာTask Killer တွေမသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင...
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို မြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်ခြင်း...
အဖျက်ကောင်တိုက်ဖျက်ရေး v1.8.1 APK (မြန်မာဘာသာပြန် ...
3d-pool-master-2-1-apk For Android Game
boatracing- For Android Game
ltbadplane-skykit For Android Game
acr21-mx-android For Android Game
gunzombie- For Android Game